» अक्सिजन अभावले वीरको नयाँ भवन चलाउन समस्या
अक्सिजन अभावले वीरको नयाँ भवन चलाउन समस्या
२०७८ जेष्ठ १, शनिबार १९:०५
काठमाडौं । वीर अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारणले नयाँ भवन सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सरकारले अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनमा कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचारका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे तापनि अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा शान्ता सापकोटाले सरकारको निर्देशनानुसार नयाँ भवन सञ्चालनका लागि तयारी गरिए तापनि अक्सिजन नपाइएपछि सञ्चालन हुन नसकेको बताए । नेपालमा अहिले १५ हजार अक्सिजन सिलिण्डरको माग र सात हजार २०० मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । “हामीले भवनमा बिरामी राख्नका लागि सबै तयारी पूरा गरेका थियौँ तर अक्सिजन नभएपछि रोकिएको छ,” उनले भनिन्, “ अहिले सङ्क्रमितलाई अक्सिजन चाहिन्छ । त्यसैले अक्सिजनविना बिरामीलाई नयाँ भवनमा राख्न सकिँदै ।”
शुरुमा एक सयदेखि ३०० शय्या सञ्चालन गर्ने योजना थियो । सर्जिकल बिरामीका लागि बनाइएको उक्त भवन ५०० शय्याको छ । त्यहाँ बिरामी राखेर उपचार गर्नका लागि कम्तीमा ६०० सिलिण्डर अक्सिजन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले अक्सिजनको आपूर्ति गर्नका लागि प्रयास भइरहेको र प्राप्त हुनासाथ भवनमा बिरामीलाई राखिने जानकारी दिइन् ।
बुढीगण्डकी बनाउन ६० अर्बको कम्पनी, १२ अर्बको सेयर सर्वसाधारणलाई
हिमालयन हाइड्रोपावरको १९ करोड ६८ लाखको आईपीओमा आवेदन खुला
तेल किन्न आफ्नै कार्यालय धितो राखेर ३ अर्ब ऋण लिदै निगम, टाट पल्टिएकै हो ?
पैसा ठीक्क पारेर राख्नुस्, आउँदैछ साढे ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आईपीओ ! (विस्तृतमा)
लुलुका ८४ शाखाबाट नेपाल पैसा पठाउन सकिने, इसेवाले गर्‍यो भुक्तानी सम्झौता
भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा, पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने